कता हरायो नेपाल भित्रिएको ३ लाख डोज खोप ? — Imandarmedia.com
कता हरायो नेपाल भित्रिएको ३ लाख डोज खोप ?
काठमाडौँ । नेपालमा भित्रिएको कोभिसिल्ड खोपको लगभग ३ लाख डोज कहाँ प्रयोग भयो भन्ने तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। नेपाललाई प्राप्त कुल कोभिसिल्ड डोज र हालसम्म प्रयोग भएको उक्त खोपको संख्याबीचको फरक हेर्दा यस्तो देखिएको हो।